अनौठा बञ्जी जम्पीङ्ग – ज्वालामुखीमा पनि बञ्जी - जिस्ट खबर अर्थात यथार्थ खबर
अनौठा बञ्जी जम्पीङ्ग – ज्वालामुखीमा पनि बञ्जी
प्रकाशित मिति : बिहिबार, भदौ २६, २०७१
हजारौं वर्ष पहिले बच्चाहरु युवा अवस्थामा प्रवेश गरिसकेपछि आफू परिपक्व भएको प्रमाणित गर्न जंगलका घाँसहरुलाई जोडेर त्यसैको सहायतामा अग्लो ठाउँबाट हामफाल्नु पथ्र्याे । आधुनिक डोरीहरुको विकास नभइसकेको अवस्थामा घाँसको सहायतामा गरिने यस साहसिक कार्यलाई ‘ल्यान डाइभिङ’ भनिन्थ्यो । जुन कुरा डेभिड एटेनबोरफले १९५० मा डकुमेन्ट्री बनाउने क्रममा पत्ता लगाएका हुन् ।
सोही साहासिक कार्यले खेलको रुप ग्रहण गर्दै जाने क्रममा १९७९ अप्रिलमा ‘अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय’ को ‘डेन्जरर्स स्पोट्र्स क्लब’का सदस्यहरुले २५० फिट माथिबाट हाम्फालेका थिए । जुन काम गरे बापत उनीहरु पक्राउसमेत परेका थिए । तर पनि हिम्मत नहारिकन उनीहरुले सो कार्यलाई निरन्तरता दिए ।
उनीहरुको यस्तो खेललाई ‘द इन्व्रmेडिबल’ नामक अमेरिकन च्यानलले देखाएपछि बञ्जी जम्पीङ्गको कन्सेप्ट विश्वव्यापी रुपमा फैलियो । टेक्नोलोजीको विकाससँगै बञ्जी जम्पीङ्ग पनि सुरक्षित ढङ्गले गराइने हुँदा यसमा मानिसको रुचि बढ्दै गएको हो । बञ्जी जम्पीङ्ग पुलबाट मात्र नभई हेलिकप्टर, हट एएर, बेलुन तथा हवाइजहाजबाट पनि हुने गरेको छ । नेपालको सिन्धुपाल्चोकमा रहेको बञ्जी विश्वकै १० अग्ला बञ्जीभित्र पर्ने ‘टेनमष्ट टुडे’ नामक वेवसाईटले लेखेको छ । विश्वका चर्चित र अनौठा बञ्जी जम्पीङहरु बारे तल उल्लेख गरिएको छ :
१. भिल्लारीका भोलक्यानो
बञ्जी जम्पीङ आफैंमा साहसिक खेल हो । अग्लो ठाउँबाट डोरीको सहायतामा हामफाल्नु पर्ने भएकाले पनि धेरैले सहभागी हुने हिम्मत नै देखाउँदैनन् । अझ कतिपय बञ्जी त यस्ता पनि पनि छन्, जुन सुन्दै अचम्म लाग्ने खालका छन् । चिलीको प्यूकोन नजिकै रहेकोे भिल्लारीका भोल्क्यानोमा हेलिकप्टरको सहायतामा बञ्जी जम्प गराउने गरिएको छ । भोल्क्यानोको ७०० मिटरमाथि रहने हेलिकप्टरबाट भोल्क्यानोको ३७७ फिटको दुरीसम्म झर्ने व्यवस्था छ । जुन भोल्क्यानोको कुल क्षेत्रफल साढे ४ किलोमिटर छ । हेलिकप्टरबाट ३७७ फिट तल र एयरपोर्टबाट ८० कि.मी टाढा रहेको भिल्लारीमा पुग्दासम्म थुप्रै रामाइला र आश्चर्यजनक दृश्यहरु देख्न पाइन्छ । यहाँ बञ्जी गर्न ६–७ दिनको छुट्टि लिएर जानु पर्दछ, किनकी यो अवधिमा बञ्जी जम्पीङ्गसंगै यहाँ रहेका अन्य ठाँउहरुमा पनि घुमाइन्छ । ¥याफ्टीङ्ग लगायतका अन्य सुविधा, ‘होटल देल लागो रिसोर्ट एण्ड क्यासिनो’ मा खाना, पेय पदार्थ आदिको सुविधा गरी ‘भोल्क्यानो बञ्जी’ नामक प्याकेज बनाइएको हो । यो प्याकेजमा एक जनाको शुल्क १२ हजार पाँच सय अमेरिकन डलर पर्दछ ।
२. मक्काउ टावर बञ्जी
चीनमा रहेको ११०८ मिटरको मक्काउ टावर ‘वल्र्ड फेडेरेसन अफ ग्रेट टावर’ मध्ये एक हो । यो प्रसिद्ध टावर लोकप्रिय बञ्जी जम्पीङ्ग साइट मानिदै आएको छ । मक्काउ टावरका तल रोड र घरहरु रहेका छन्, जहाँ बञ्जी गर्दा जमीनको ठिक १०० फिटमाथि पुगिन्छ । ७६५ मिटर हावामा उडेर मजा लिन सकिन्छ । यो संसारको अग्ला बञ्जी जम्पीङ्ग साइट मध्ये एक हो । यहाँ बञ्जी जम्पीङ्ग गर्दा १ हजार ४ सय ८८ डलर पर्दछ । जस अन्तर्गत बञ्जी जम्पीङ्गको प्रमाणपत्र, सदस्यता कार्ड र बञ्जीको टि–सर्ट प्रदान गरिन्छ ।
३. भिक्टोरीया फल्स
हामी धेरैले यो नाम सुनेकै छौं । तर यहाँ बन्जी जम्पीङ्ग पनि गरिन्छ भन्ने कमैलाई थाहा होला । ३६० फिट माथीबाट गराइने बन्जी तल ५ हजार ६०० क्षेत्रफल पानी रहेको छ । यहाँको शान्त र सुन्दर वातावरणमा बञ्जी जम्प गर्न मार्चदेखि जुनमामात्र पाइन्छ । यहाँ बञ्जी गर्न १३० डलर पर्दछ ।
४. रोयल गोर्ज ब्रिज
कोलोराडोमा रहेको संसारको अग्ला पुलहरु मध्ये यो एक हो । १ हजार ५३ फिट अग्लो यो पुलबाट बञ्जी जम्पीङ्ग गरिन्छ, जुन २०१४ को अग्लो बञ्जी जम्पीङ्ग अन्तर्गत पर्दछ । मनोरञ्नका लागि यहाँ पार्क पनि बनाइएको छ । यहाँ बञ्जी जम्प गर्दा पानी भन्दा २०० मिटर माथिसम्म पुग्न सकिन्छ ।
५. वेस्ट इडमन्ट मल
क्यानडामा रहेको वेस्ट इडमन्ट मल संसारको सबैभन्दा ठूलो इण्डोर एम्यूजमेन्ट पार्क हो । जहाँ थुप्रै गेमहरु रहेका छन् । यही मलमा बञ्जी जम्पीङ्ग पनि हुने गरेको छ । वार्षिक ३० मिलियन मानिस घुम्न आउने गरेको यो ठाउँमा १०० मिटरभन्दा अग्लोे इण्डोर बञ्जी जम्पिङ्ग छ । यहाँ बञ्जी जम्प गर्न ७५ डलर तिर्नुपर्छ ।
जब नातिनीले आफ्नै हजुरबासँग प्रेम विवाह गरिन्
गल्ती गर्ने श्रीमतीलाई अनौठो सजाय, एक महिनासम्म सम्भोगमा बन्देज !
अचानक कपडाबाट फुत्त बाहिर निस्किए मोडलका निजी अङ्ग तैपनि दिइन् पोज ! (तस्विर सहित)
पाडापाडीकाे जन्मदर्ता : भैँसीलाई ‘सुत्केरी भत्ता’ ५ हजार, पाडीलाई २० हजार !
दशैंका जमराको व्यापार